MediaLight Mk2 फ्लेक्स CRI 98 6500K सेतो पूर्वाग्रह प्रकाश - MediaLight बायस प्रकाश
घर MediaLight Mk2 फ्लेक्स सीआरआई 98 6500 K व्हाइट बायस प्रकाश
by MediaLight Mk2 श्रृंखला
बचत $ 0.00 बचत $ -62.95
product.variants.choose_variant २ मीटर / छैन -।। .. २ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 2)) - $ ...8.95। २ मीटर / छैन -।। .. २ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 3)) - $ ...8.95। २ मीटर / छैन -।। .. २ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 4)) - $ ...8.95। २ मीटर / छैन -।। .. २ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 5)) - $ ...8.95। २ मीटर / छैन -।। .. २ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 6)) - $ ...8.95।
2 मीटर3मीटर4मीटर5मीटर6मीटर स्ट्रिप लम्बाई
होइन MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 8.95)) तपाईंको Mk2 फ्लेक्समा MagicHome वाइफाइ डिमर थप्ने हो?
रंग-क्रिटिकल भिडियो अवलोकन वातावरणको लागि अधिकतम प्रकाश
के तपाई टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सम्पूर्ण जीवनलाई?
मिडियालाइट Mk2 फ्लेक्सको साथ, तपाईं अन्तत: तपाईंको टिभीमा फिल्महरू हेर्न रमाउन सक्नुहुनेछ तपाईंको अम्बियन्ट प्रकाश सही छ कि छैन भनेर चिन्ता नगरिकन। हामीले अविश्वसनीय सटीक नक्कलको परीक्षण र निर्माण गरेका छौं D65 सेतो पूर्वाग्रह प्रकाश जुन इमेजि Science विज्ञान फाउंडेशन द्वारा प्रमाणित हो र विश्वव्यापी पेशेवरहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ।
Mk2 ले USB-संचालित LED पूर्वाग्रह प्रकाश प्रणालीको सुविधा र पोर्टेबिलिटीको साथ अल्ट्रा-उच्च CRI र र color्ग तापमानको शुद्धतालाई संयोजन गर्दछ। र Color्ग-स्थिर डिमिming र तत्काल वार्मअपले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईको वरपरको प्रकाश जहिले पनि लक्ष्यमा हुन्छ।
यो अन्धकारमा बस्न रोक्नको लागि समय हो (वा, कम्तिमा पनि टिभी हेर्दै)!
- क्रिस हेनोन, सन्दर्भ होम थियेटर
MediaLight Mk2 सुविधाहरू:
• उच्च सटीकता 6500K CCT (सहसंबद्ध रंग तापमान)
• रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI) ≥ 98 Ra (TLCI 99)
• रंग स्थिर dimming र तत्काल वार्मअप
•5v USB 3.0 (900mA वा कम) 5-6m को लागी संचालित
•5v USB 2.0 (500mA वा कम) १-४ मिटर (५०० एमए मुनि) वा ५. meters मिटर (५०० एमए भन्दा बढी) को लागी USB 1 पूर्ण चमकमा (एम्पेरेज लम्बाई संगै बढ्छ)
Inf इन्फ्रारेड PWM dimmer र रिमोट कंट्रोल (सार्वभौमिक रिमोट र स्मार्ट ब्लास्टर संग सुसज्जित स्मार्ट हब संग मिल्दो)
• पील र प्रामाणिक 3M VHB माउन्टिंग चिपकने स्टिक
• संयुक्त राज्य अमेरिका एडाप्टर (जरूरी छैन यदि एक USB 3.0 पोर्ट TV मा उपलब्ध छ)।
• 0.5m विस्तार शामिल
Year ५ बर्ष सीमित वारेन्टी
High उच्च गतिशील रेंज (HDR) सहित सबै प्रदर्शन को लागी सिफारिश
"०" भन्दा ठूला डिस्प्लेका लागि, जहाँ lighting-पक्षीय प्रकाश चाहिन्छ, हामी दुई इन्चको सट्टा पट्टि किनाराबाट inches इन्च राखी सिफारिस गर्दछौं। यो यस्तो छ कि तपाईले चारै तिर पाउनु भन्दा पहिले एलईडी नछोडियोस्।
कृपया पढ्नुहोस् यदि "स्ट्यान्डमा प्रदर्शन" को लागि दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्:
यो छोटो पट्टी प्रयोग गर्न अलि कम लागत छ, तर मानिसहरूले गुनासो गरेका छन् कि "हेलो" धेरै फैलिएको देखिन्छ जब बत्तीहरू प्रदर्शनको छेउबाट अगाडि छन्। यसले बत्तीहरूलाई कम प्रभावकारी बनाउँदैन, तर तपाईंसँग कम विकल्पहरू छन् र केही कन्फिगरेसनहरूको लागि स्ट्रिप धेरै छोटो हुन सक्छ। यदि तपाईंले3र 4-पक्षीय सिफारिसहरूमा आकारहरू छनौट गर्नुभयो भने तपाईंसँग थप विकल्पहरू हुनेछन्।
छोटो कन्फिगरेसनले अझै पनि 1m ग्रहणको लागि कम्प्युटर मनिटर 46 सम्म काम गर्दछ। यो किनभने, सानो डिस्प्लेमा, डिस्प्ले स्ट्यान्डमा हुँदा विभिन्न पक्षबाट प्रकाश थप समान रूपमा जोडिन्छ। (यही कारणले गर्दा3पक्षहरूले कम्प्युटर मनिटरको तलको लागि पर्याप्त प्रकाश प्रदान गर्नेछ। बायाँ र दायाँ पक्षहरू अझै पनि ठूला प्रदर्शनहरूको तुलनामा धेरै नजिक छन्)।
4.9 317 समीक्षाहरूमा आधारित
महान पूर्वाग्रह प्रकाश
स्थापना राम्रो भयो। 90 डिग्री बेन्डहरू गर्ने उत्तम तरिका पत्ता लगाउनु अलिकति गाह्रो थियो, तर LED स्ट्रिपमा तोकिएको बेन्ड स्पटहरूमा पर्याप्त फ्लेक्स थियो। रंग धेरै समान छ र हाम्रो नयाँ Sony A80J पछि राम्रो देखिन्छ। जेसनको वारेन्टी पनि अचम्मको छ यदि हामीले कहिल्यै नयाँ टिभीमा स्विच गर्न आवश्यक छ भने।
२ मीटर / छैन
मेरो अवलोकन अनुभव पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो
केही समयको लागि म अँध्यारो कोठा र मेरो आँखामा कम तनाव कसरी गर्ने भनेर पत्ता लगाउन खोज्दै थिएँ। यो प्रकाश पट्टी सबै भन्दा राम्रो समाधान हुन गयो। मसँग ६५" OLED टिभी छ र तस्विरमा ब्याकलाइटले अझ राम्रो देखिन्छ। उच्च सिफारिश!
२ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 3))
यो लाइट सेटअप गर्न एकदमै सजिलो थियो र यसले मनोरञ्जन केन्द्रको सम्पूर्ण गतिशीलता परिवर्तन गरेको छ।
उत्कृष्ट उत्पादन, यो प्रकाशले टिभी हेर्न वा मेरो कम्प्युटर मोनिटरमा बसेर मेरो आँखामा धेरै सजिलो बनाउँछ। साथै धेरै छिटो ढुवानी।
२ मीटर / MagicHome वाइफाइ डिमर थप्नुहोस् (+ $ 2))
MediaLight mk2 फ्लेक्स
यो महान थियो। सजिलो स्थापना सजिलो सेटअप। सबै समावेश छ। साँच्चै टिभीलाई अलि बढी पप गरौं।